Itshaja zerampow zazo zonke iimfuno kweli hlobo | Iindaba zeGajethi
Itshaja zerampow zazo zonke iimfuno kweli hlobo
Ihlobo liza kwaye kunye nokuhamba. Ingxaki kuxa sikulo mzuzu wokuqokelela zonke izinto esizifunayo kuhambo, itshaja yekhompyuter, itshaja yewatchwatch, itshaja ye-smartphone ... Impambano yokwenene! Ke namhlanje sikubonisa ezinye iindlela.
I-Rampow ngumvelisi we-brand waseAsia wezinto zonke, kwaye ngeli xesha sibonisa uluhlu lweetshaga ezixubeneyo ezinokuhamba nawe ehlotyeni. Fumana ezi ndlela zintathu sikubonisa zona kwaye ngokuqinisekileyo zinokufika ngokufanelekileyo ukunqanda ukuba ityesi yakho igcwele iintambo.
1 Ukuhanjiswa kwamandla kunye nokuHlawula ngokukhawuleza 3.0
2 Ukuhanjiswa kwamandla 3.0 ukuya kuthi ga kwi-36W
3 Ukutshaja ngokukhawuleza kwe-3.0 ukuya kuthi ga kwi-39W
Ukuhanjiswa kwamandla kunye nokuHlawula ngokukhawuleza 3.0
Siqala ngokuguquguquka, le tshaja inezibuko ezimbini, Ukuhanjiswa kwaMandla kwe-USB-C kunye neQualcomm USB-Ukukhutshwa ngokukhawuleza kwezibuko le-3.0. Oku kuqinisekisa amandla ukuya kuthi ga kwi-36W kuxhomekeke kwisixhobo esisisebenzisayo. Oku kuyakusivumela ukuba singabizi nje kuphela izixhobo ezinje nge-iPhone okanye i-Samsung Galaxy S20, kodwa siya kuba nakho ukubiza ii-laptops ezithile ezinje ngeMacBook Air okanye iMacBook kaApple. Kungenxa yoko le nto sithetha ngale tshaja ikhawulezayo njengeyona ibhetyebhetye esiza kuthetha ngayo namhlanje.
Sebenzisa ikhowudi I7AXQC5L kwaye uya kuba nesaphulelo sama-32%, esiya kuyishiya nge-13,79 euro. > UKUTHENGWA KWE-LINK
Le tshaja inokuthengwa ngemibala emibini eyahlukeneyo, omhlophe nomnyama, nangona ndihlala ndicebisa abamnyama ngokuzinza. Inenkqubo yokhuselo ngokuchasene nokugcwala kwazo zonke iintlobo, kunye nenkqubo ethintela imijikelezo emifutshane ukuyikhusela ekufikeleleni kwisixhobo sethu esixabisekileyo esiphathwayo. Kubaluleke ngakumbi ukubiza ii-smartphones ngeshaja elungileyo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, sinenkqubo yokukhusela iqondo lokushisa, kuba ukutshaja ngokukhawuleza kwazo zonke iintlobo kudla ngokubangela ukufudumeza kakhulu kwizixhobo ezithile.
Ukuhanjiswa kwamandla 3.0 ukuya kuthi ga kwi-36W
Ngoku sithetha ngeyona "yanamhlanje". Kuyacetyiswa ngakumbi ukutshaja izixhobo ezinezibuko le-USB-C. Ngombulelo kwi-USB-C yayo yokuhambisa umbane ye-3.0 port, iyakwazi ukubonelela nge-3 amps kwizibuko ngalinye, ngaloo ndlela ifezekisa ukutshaja ngokukhawuleza kwe-3.0. kuzo zonke izixhobo ngaxeshanye. Inenkqubo yokuchonga isixhobo ekrelekrele, oku kuthetha ukuba iya kuba nakho ukufumanisa ukuba sidibanisa, umzekelo, ilaptop kwaye ke siyinike amandla ayimfuneko, nangona kule meko sincoma ukusebenzisa enye ye-USB-C amazibuko. Iya kunikezela ngesixhobo esingaphezulu nangaphantsi kwamandla afanelekileyo, ukuya kuthi ga kwi-30W ngaxeshanye.
Sebenzisa ikhowudi SD8VKNQB kwaye uya kuba nesaphulelo sama-35, ungayithenga nge- € 13,65 kuphela> UKUTHENGWA KWE-LINK.
Njengazo zonke izixhobo zeRampow esithetha ngazo namhlanje, sinoKhuseleko ngokuchasene nomthwalo ogqithisileyo, ukuthintela iisekethi ezimfutshane kunye namaqondo aphezulu obushushu. Ngale tshaja ukuya kuthi ga kwi-36W siya kuba nakho ukubiza isixhobo ngeenxa zonke I-70% ngokukhawuleza kunokuba besinokwenza kwitshaja ye-5W yakudala enezixhobo ezininzi ezibandakanya. Ukongeza, iRampow ibonelela ngesiqinisekiso "sobomi" njengoko kuchaziwe kwikhadi elibandakanyiweyo kwiphakheji. Ngendlela efanayo neadaptha zangaphambili ezichazwe kweli nqaku, sinemibala emibini esinokukhetha phakathi komhlophe nomnyama, nguwuphi owuthanda kakhulu?
Ukutshaja ngokukhawuleza kwe-3.0 ukuya kuthi ga kwi-39W
Sithetha ngeyona inamandla kakhulu, itshaja yeRampow enikezela nge-39W yamandla, ikwazi ukuhambisa ngengqondo amandla afunekayo nokuba ngaba isixhobo sinokuNgqinisisa okuKhawulezayo okungu 3.0 okanye hayi. Ngendlela efanayo, inokhuselo kwimithambo kunye nokumelana namaqondo obushushu aphezulu, asinakulindela okuncinci kwimveliso eqinisekisiweyo yamandla afanayo. Ndiyakuthanda ukugxininisa ukubaluleka kokusebenzisa iitshaja ezenziwe kakuhle xa uqhagamshela izixhobo zethu, kuba ukonga kwezi ntlobo zezincedisi kunokubiza imali enkulu kuthi.
Intlawulo ekhawulezayo ye-RAMPOW 3.0 ...
Ngeli xesha sinayo kuphela ngombala omnyama, kodwa ine-compact design engazithinteliyo ezinye iiplagi, njengoko isenza kwezinye iintlobo zeetshaja ezinkulu kakhulu. Iyahambelana nendawo yonke nezixhobo ezinje nge-iPhone 11 Pro okanye i-Huawei Mate 30 Pro umzekelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Itshaja zerampow zazo zonke iimfuno kweli hlobo
Yeyiphi eyona antivirus yasimahla kwi-Intanethi yePC esebenzayo?
I-Moshi Otto Q + Vortex 2: Ishaja engenazingcingo ngokukhawuleza